दैनिक सेयर कारोबार अवधि ५ घण्टा बनाउने नीति असफल भएकै हो त ? – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार १२:०८ Basanta Khanal	0 Comments	share market
काठमाडौं : नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को दैनिक सेयर कारोबार समय ५ घण्टा बनाउने प्रयास असफल सावित भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशन बमोजिम १ वर्ष अघि (२०७६ चैत २ गतेदेखि) परीक्षणका रुपमा भन्दै नेप्सेले सेयर कारोबार समय बढाएर दैनिक ५ घण्टा पुर्याएको थियो । यद्दपि परीक्षणकाल सुरु भएको ८ दिनपछि कोरोना महामारीका कारण सेयर बजार नै बन्द भयो ।सरकारले कोरोनाको रोकथाम भन्दै गरेको लक डाउनका कारण नेप्से कारोबार २०७६ चैत १० गतेबाट करिब ३ महिना बन्द भयो । त्यसपछि असार १५ गतेदेखि नेप्सेले फेरि नियमित कारोबार सुरु गर्यो । तर बजार खुल्दा सेयर कारोबार समयलाई पुनः ४ घण्टा (११ बजेदेखि ३ बजेसम्म) मा सीमित गरियो । त्यसयता नेप्से कारोबार दैनिक ४ घण्टा नै सञ्चालन हुँदै आएको छ । तथापि फेरि नेप्से करोबार दैनिक ५ घण्टा बनाउने कुनै तयारी नभएको नेप्से स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार लक डाउनका कारण बजार बन्द हुनुभन्दा अघि गरिएको परीक्षणमै ५ घण्टा कारोबार असफल देखिएको थियो । स्रोतले भन्यो गत वर्ष चैतमा नेप्से कारोबार दैनिक ५ घण्टा परीक्षणका रुपमा सुरु गरे पनि अहिलेसम्म यसलाई पुनः ५ घन्टा बनाउने कुनै तयारी छैन । ५ घण्टे कारोबार नीति कार्यान्वयन लगभग असफल जस्तै भएको छ । त्यतिबेला नै कारोबार लगायत अन्य कारणले असहज जस्तो भएको थियो नेप्सेका एक अधिकारी भन्छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशन अनुसार नेप्सेले कारोबार समय थपेको थियो । नेप्से स्रोतका अनुसार बोर्ड अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाको ठाडो आदेशमा कारोबार समय थप भएको थियो ।
स्रोतले भन्यो धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले आफू आउने बित्तिकै कारोबार समय थप गरेर ५ घण्टा पुर्याउनु भएको हो । त्यो अहिले नै सफल हुने देखिएको छैन । यता धितोपत्र बोर्डमा पनि अहिले नै सेयर कारोबार समय बढाउने कुनै तयारी तथा छलफल नभएको बोर्ड स्रोतले बताएको छ । सेयर बजारका सरोकारवालाहरु पनि अहिले दैनिक ४ घन्टाकै अवधिमा रमाइरहेका छन् । यसमा कसैको पनि विरोध देखिएको छैन ।
← २१ वर्षीय छोराले आमाको ज्यान बचाउन : जब ८ महिनाको गर्भ फालियो
कलाकारको वर्ष दिन : कोको तानिए विवादमा ?( महानायकको विवाददेखि पलको गिरफ्तारीसम्म) →
सर्वोच्चको ऐतिहासिक निर्णय: प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना
२८ माघ २०७७, बुधबार १९:२१ Basanta Khanal	0